Ndi North Carolina enwere igwe gbara ugwu? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Brevard nc ugwu igwe kwụ otu ebe - ịza ajụjụ ndị a
Brevard nc ugwu igwe kwụ otu ebe - ịza ajụjụ ndị a
Ndi North Carolina enwere igwe gbara ugwu?
North Carolina bụala nke magburu onwe yaigwe kwụ otu ebeụzọ ụkwụ, karịsịa n'imeugwuna mpaghara ọdịda anyanwụ nke steeti.Dec. 30 2016
Nabata na ịnya ịnyịnya na Seth. Taa, anyị na-apụ n'ọhịa maka ịgba ịnyịnya ụtụtụ na North Carolina. Anọ m ebe ahụ maka ihe ndị m na-enweghị ike ịtụle n'oge a, naanị ụtụtụ Satọde ga-agbago ihe.
fixie ike nrụgide
Naanị awa ole na ole n'ime otu ebe kachasị mma na-aga n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ. Ọ bụ ụdị mmekpa ahụ, mana m kpebiri ịgụ ya. Fọdụ n'ime unu nwere ike ịmata nke a Raleigh Tokul.
Mụ na Phil nwere obere nkata ka anyị na-arị ugwu, mana m nọ na-eche etu esi aga? Na mgbada m ga-akwọ ụgbọala megide ya. A sị ka e kwuwe, Phil bụ ọkachamara na-agba ọsọ ọsọ, mana ọ nwere ọghọm na obere nsogbu siri ike. Naanị ihe m ga-eme bụ ịgbaso usoro ya, nri? Ya mere, Phill na-ese m anwụrụ na mgbada, mana nke ahụ abụghị ihe ijuanya.
Ka m kwusara ozi ọma, igwe kwụ otu ebe anaghị eme onye na-agba ya. Anyị malitere ịrị ụzọ dị iche mana oge a aga m akpọrọ anyị gbadata. Onye ọ bụla n'ime unu na-eji ngwa GoPro ọhụrụ, ihe niile ị ga - eme bụ ịbanye iji ya.
Ọgwụgwụ nke ọkwa. Ọ bụrụ na ịlele eserese ahụ, a ga-ahapụrịrị ụzọ ahụ. Eleghi anya, m na-eche na ọ dị ka echiche na-adịghị mma Na-ahụ ihe site na njem onye ọhụụ, mana ọ dị ka ọ bụ echiche na-adịghị mma ịnọdụ ala n'etiti oke nkenke na warara nke ụzọ nzọ ọtụtụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị abịarughị nso izute ndị njem a. Ọgụ ahụ na-aga n'ihu. Nke ukwuu maka izu ike n'ubu m.
Ka o sina dị, nke ahụ bụ maka njem dị mkpirikpi ụtụtụ ahụ. Aga m eme njem ole na ole ọzọ gaa mpaghara ụzọ ụgbọ ala Asheville n'oge oyi a. Enwere olile anya oge ọzọ ọ gaghị adị ọsọ ọsọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata azụ akụkọ na a igwe kwụ otu ebe Phil nọkwa na-elele nkọwa maka njikọ. Daalụ maka ịkwọ ụgbọala m taa m ga-ahụ gị oge ọzọ.
Brevard NC nọ n'ugwu?
Maka obereugwuobodo,Nwokochanwere omenala kariri onodu ogugu kariri. Ọ bụ ebe obibi n’ụwa niileNwokochaMusic Center na ya extaordinary Summer Music Festival, Porter Center maka Perrụ Arts naNwokochaMahadum, na obodo egwu dị egwu.
Ugwu National Pisgah mara oke mma nke na ọ dị mfe ichefu etu o siri dị ize ndụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ nzọ ụkwụ nke na-adịghị ewe gị n'ebe dị anya site na mmepeanya ma ka na-enye ahụmịhe epic, soro m na m ga-egosi ị bụ otu ọkacha mmasị m ụzọ ụkwụ na north carolina ụmụ okorobịa ịnabataghachi na njem ọzọ taa anyị nọ n’azụ azụ m na Inpisgah National Forest na-akụ otu n’ime ụzọ kachasị amasị m n’okpuru ojii ojii ojii ụzọ ojii ojii niile dị oke egwu ma dị egwu ma akụkụ ala. bụ nnọọ flowy na tọn jumps na eke mgbidi agafe, nke m hụrụ n'anya na-eso na anyị njem taa. Akpọrọ m Heavy Metal Dylan Canadiancarland Maazị Thumbnail n'onwe m enweghị ike ichere igosi gị ụzọ a.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị m, nọrọ na m n'ihi na anyị nọ na -emebi ya tupu anyị enwee ike ịme ihe ọ bụla anyị chọrọ ịrị na Thriftcovewell. Ma maka ịrịgo ahụ, ọ dị mma, mana ọ na-arị ugwu, n'ezie ọ bụghị a otutu nkume na mkpụrụ osisi na-achọ maka na-edebe pedals ala ọ na-akawanye nkpoda na akụkụ ndo niile mkpọtụ na igwe kwụ otu ebe m chọrọ ọhụrụ pivot biarin ma eleghị anya, a ọhụrụ ala mgbodoisi ekweisi na-eburu dum Caboodle ihe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị ịrị bụ akpatre anyị bụ na elu ugwu a na-ewega anyị n'ụzọ niile azụ n'ụgbọ ala enweghị ike ị chere, obi dị m ụtọ na ụmụ okorobịa na-abịa n'ihi na nke a bụ ihe ọ funụ, n'oge a ụzọ a na-esi na-asọ asọ rue chunkyquicksososoman, ụzọ a na-atọ ụtọ nke ukwuu , yabụ chunkyyeah nwere oke mmiri, amaara m na achọrọ m biya emesịa Ya mere, anyị na-aga ebe a na-aga hub iji hụ unu ebe ahụ mgbe Lower Black Mount ain zutere. Ọ bụ ihe dị mma mgbe niile ịkụ ụgbọ.
Na-achọ ụzọ ọsọ ọsọ na ntakịrị teknụzụ dị na ma ọ bụ Black Mountain ị gaghị ada mbà Dowe jidere gị na njem ọzọ ị na-abịa
Ebee ka m ga-agba ịnyịnya igwe m n’ugwu na Asheville NC?
Ugwu Ugwu&Igwe kwụ otu ebeIlszọ ụkwụ,Asheville
Okporo ụzọGba ígwègburugburuAsheville. Maka ụzọanyịnya igwe, ebe a ma ama bụ Blue Ridge Parkway.
Igwe kwụ otu ebeMgbazinye
Bent CreekUgwu Ugwu.
Dupont State Recreational Forest - Anyị Favorite!
Ọdọ mmiri Lure.
Kedu ihe bụ ugbo igwe?
Ugbo ala Ugbobẹ mee-ya-aigwe kwụ otu ebeha bụ ndị ọrụ afọ ofufo. N’ime ụlọ ahịa, ọ dịkarịa ala ndị ọrụ afọ ofufo abụọ ga-anọ n’ụlọ ahịa ahụ iji nyere gị aka ịmụta ịrụ ọrụ n’onwe gịigwe.
A na-eji ike Pedal eme ihe n'ụwa niile iji mee ihe bara uru. Igwe ahụ bụ igwe dị mma nke na-adọta ike bara uru n'aka anyị bụ mmadụ. Abụ m onye sitere na ndị ọchị agha.
Taa, m na-ezute Miriam na Ethan bụ ndị na-ewu ma na-ewu igbe dị oke egwu, nke bara uru. Igbe dị ụtọ! Anyị chọrọ enyemaka gị! NAT: Ethan na Miriamare, ma ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na ndị nrụpụta. Ha wepụtara onwe ha rụọ ụlọ na-adọkpụ ụgbọ ịnyịnya ibu maka Groundwork Somerville.
Ntọala ala na-eme ọtụtụ ihe iji nyere obodo aka ka ị na-arụ ọrụ ugbo a nke mepere emepe. Childrenmụaka ndị otu Green Team na-enyere aka n'ịkụ na ilekọta akwụkwọ nri na-eto n'ugbo a. The Green Team ga-eji igwe kwụ otu ebe nke Ethan na Miriam na-ewu iji were akwụkwọ nri na ahịa ndị ọrụ ugbo ahụ ree.
Enwere m ike ịnyere aka na ụfọdụ ọrụaka ọrụaka. Kedu ihe unu mere ugbu a iji nweta ya ebe a? MIRIAM: Na mbu, anyi na Jess nwere nzuko, ya onwe ya bu onye nduzi ihe omume na Groundwork Somerville, anyi lere anya na ugboala ya na achoputara ya ma anyi mata ya. Anyị na-etinye ụgbọ ịnyịnya ibu enyere wee debe igbe dị mma iji debe akwụkwọ nri kwesịrị ịnọ. oyi, a tub ebe anyị na-niile anyị na-ezuru, anyị nwere tebụl n'ụzọ dị otú a na-gbajuru elu n'ebe ahụ. A na-ejide ihe niile yana ụdọ na-agbanwe agbanwe.
Ma ọ mara ezigbo mma. ETHAN: Ọ bụrụ na anyị nwere otu ihe mere ya niile maka Gị? Nke ahụ dị mma. MIRIAM: Anyị chepụtara atụmatụ maka igbe a gwara mmanụ nke ejiri osisi rụọ.
Ọ bụ igbe dị jụụ, ụgbọala na-adọkpụ bọs na ebe onye ọrụ ubi. ETHAN: Ejiri d na mpempe plywood mee akụkụ nke igbe ahụ. Anyị na-etinye ogwe mkpuchi mkpuchi ụfụfụ siri ike n'akụkụ nke ọ bụla nke igbe ahụ.
MIRIAM: E kpochakwara akụkụ niile nke igbe ahụ ọnụ na gluu. Mgbe ahụ, anyị ji kposara osisi gụchaa ha. Otutu: Enwere otutu mwekota iji jide ya n'ime oge n'oge Glue.
MIRIAM: Leekwa igbe anyị agwụla. ETHAN: Ee, ihe mmasi kacha amasị m nke ezigbo ụlọ. NATU: Gini ka m kwesiri ime? Ihe anyi ga eme bu iwu ihe a ma mee ka oghaga ya.
MIRIAM: Whee ls, ihe eji adọkpụ ụgbọala na-adọkpụ, nke na-adọkpụ ọ dị mkpa ka anyị sie ike
NAT: Ethan na Miriam kọwara ihe dị n’ọrụ a. Ma ọ ga-amasị m izute ndị otu Green Team dịka ha ga-abụ ndị ngwụsị nke ndị ọrụ igwe kwụ otu ebe. Kedu ebe kachasị anya ị gbarala n’elu igwe kwụ otu ebe na ụgbọala na-adọkpụ? Ugboro abụọ site na ụlọ ọrụ wee? kilomita abụọ azụ.
Typedị ịnyịnya ígwè ọ bụla na-aga n'okporo ụzọ ndị na-adịghị ike nwere ike imebi ihe ndị ahụ na-aga n'okporo ụzọ. Suspensiongbakwunye nkwusioru nwere ike ịdị mkpa. Ma eleghị anya, anyị nwere ike ịhazigharị ihe a ma ị nwere ike ịgwa m ihe nwere ike ịdị ogologo ziri ezi.
Ọ dị mma olee otú nke ahụ dị? ga-ebu oke ibu. Ọ DỊ MMA. Nke ahụ nwere ike ịbụ 20 sentimita asatọ nke njem.
Ọ bụrụ na anyị agbadata nke a site na sentimita atọ, echere m na anyị ga-enwe ọtụtụ ụlọ maka nkwusioru. Aghaghị m ịgbakwunye wiilị na trailer ahụ n'ụzọ na-enye ohere ka ụkwụ ahụ nwee ike, hop, hop. My echiche ebe a bụ iwerekwa ụfọdụ n'ezie nnukwu mgbabere uzo.
Anyị na-etinye mgbatị na igbe na wiilị na mgbatị ahụ, ma ugbu a, anyị nwere njem nkwusioru. Ana m eme ihe nlere. Ọ bụ ụzọ iji nwalee akụkụ ahụ site na ịmachi ha nwa oge ka m wee hụ otu ha si arụkọ ọrụ ọnụ nke ọma, usoro nkwusioru dị mfe.
Nke a bụ elastomer. O nwere ntakịrị oge mmiri. Lee ihe ahụ anya, wụpụ! Gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na anyị anyara otu ụgbọala wee kụọ ụkwụ, ma nke ọzọ ka nọ n ’ala dị larịị? Nke a na - eme n’ebe etinyere n’etiti axle na mgbabereda mgbe otu akụkụ kụrụ ngọngọ na akụkụ nke ọzọ adịghị ada.
Mana amaara m otu ihe mejupụtara nsogbu a. Mkpanaka ngwụcha na-enye m ohere ijikọ ụzọ abụọ ahụ n’enweghị nsogbu ma ka na-ekwe ka mmegharị dị n’etiti ha. Lelee ya anya, otu akụkụ nwere ike ịkụ bump na njikọta n'etiti axis na mgbatị ahụ zuru oke.
Nke ahụ bụ ihe mkpara ngwụcha ga - enyere anyị aka ịgafe n’ọkwa ọzọ. Ugbu a, m na-aga n'ihu ịmepụta igbe ahụ. Na m na-welded mkpanaka nsọtụ ka na-adabere, otú m dị njikere maka Atta ch.Cool! Ya mere taya ahụ nwere nkwusioru nke ụfọdụ Bumps nabatara.
Ebe nke abụọ nke nkwusioru ma ọ bụ mgbanwe na-ewere ọnọdụ bụ na mgbachi n'onwe ya. Ọ bụrụhaala na anyị ehulata ya ntakịrị, ọ ga-alaghachi kpamkpam n'oge ọ bụla. Mgbe ahụ n'ezie ebe nke atọ ebe nkwusioru ahụ bụ na elastomer.
Ha, ọ na-arụ ọrụ! Lee abamuru. (ọchị) Cheta mgbe m kwuru na mgbatị ga-ehulata, mana ọ nwere ike ọ gaghị ehulata oke? Emehiere m, ọ gbagọrọ agbagọ nke ukwuu ma wee gbagọrọ kpamkpam. Naanị ihe m ga-eme bụ ihu ya ala ma kwunye ya igwe ọzọ iji kwado ya.
Mpempe uzo a nke mkwadoro ya kwesiri idobe ihe ndia di nma ma sie ike na ike. Ugbu a, ihe m kwesiri ime bụ ijikọtakwa ihe niile ma nwalee ya ọzọ. Oge itinye ihe mkpuchi na igwe kwụ otu ebe.
Na n'ezie, n'ike mmụọ nsọ site ụfọdụ igwe kwụ otu ebe m hụrụ tupu, e nwere mgbe ụfọdụ ụfọdụ ụdị nke mmanya ma ọ bụ mmanya na-emekarị na-abịa si na ala nke ụgbọala na-adọkpụ wee tinye ihe dị ka. Ana m ewere mpempe a kwụ ọtọ ma kpọọ ya ka ọ bụrụ ọdịdị S. (Whistling) M na-eji ihe eji egwu mmiri nke nwere piston hydraulic nke m nwere ike imipu iji jiri nwayọ gbagoo ọkpọ ahụ ọ bụ karịa nke Z karịa usoro S mana ọ ga-arụ ọrụ.
Ọ dịghị njọ. Ugbu a, m na-eji pịa pịa mbubata ọnụ nke ọkpọkọ. Mgbe ahụ, m na-arapara na mkpara abụọ m nwere ike ịbanye n'ime ala igbe igbe ụgbọala na-adọkpụ.
Iji mee ka ụgbọala na-adọkpụ ụgbọala na-adọkpụ na-adọkpụ ụgbọala na-adọkpụ na igwe kwụ otu ebe m na-agbazi mpempe akwụkwọ abụọ. Nke a na-etolite oghere nke oche oche nwere ike ịmịcha. M gbakwunyere agbụ iji mee ka eriri olulu ahụ kpọgidere n'elu oche ma ghara ịdakwasị tube oche ahụ.
Ihe nkedo a na-emechi oghere mepere emepe iji nweta njikọ ahụ. O yiri ka ọ na-arụ ọrụ. Ka anyị gafee ụfọdụ bumps.
Obi dị m ezigbo ụtọ - ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ. Taa, ana m esi n'ụgbọala ịnyịnya ígwè m ga-arụ weta. (Cheering) Nwaanyị: Nke ahụ dị mma, ee! (Cheering) Kedu ihe na-eme, otu? - Kedu ihe ị chere? - Anya ọma.
NATE: Miriam na Ethan wuru igbe ahu, ha meputakwara ihe osise vinyl di egwu ka ijiri taa. Ọ dị egwu! Ọrụ gị masịrị m. Ọrụ gị masịrị m.
Nate: Ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu mgbe onye ọ bụla na-atụnye ihe pụrụ iche na nke pụrụ iche na-eme ka ihe dị jụụ karịa ka onye ọ bụla n’ime anyị nwere ike wuru onwe anyị. AJ IN: Nke ahụ mara mma - enweghị m ike ịnwale ịnwale ya. Ee, a okuku! Ọchị ahụ were ya nke ọma.
Kedu ihe ị chere? - Ee, echere m na e jiri ya tụnyere ụlọ ochie na-adọkpụ, njem ahụ dịkarịrị jụụ ma dịrị m mfe. The suspensions na-arụ ọrụ nke ọma. Adim njikere itughari.
NAT: Nke a bụ Somerville Mobile Market nke m chọrọ iji nyere aka rụọ ọrụ. Ma ọ nọ n'ọrụ - enwere ndị nọ ebe a, ha na-azụta akwụkwọ nri ozugbo n'ụgbọ ahụ na Green Team toro onwe ha. O nweghị ihe dị ka ịrụ ihe dị mkpa.
Kedu ka njem ahụ siri gaa? Ridegba ọsọ ahụ dị ezigbo mma, amachaghị m ma ọ ga-abụ ihe na-enye afọ ojuju karị, m ga-eji ikike injinia m wee bụrụ akụkụ nke otu ndị otu iji nyere aka na nnukwu ọrụ, iji wuo ezigbo ihe bara uru na-enyere aka otutu mmadu na otutu ndi mmadu n’eme obi uto. Ihe niile gbasara nke a. Aga m ejide tomato.
Ma n'ezie ụfọdụ poteto kwa.
Brevard dị n’Ugwu Anwụrụ?
Nwokocha, North Carolina - NnukwuUgwu AnwụrụObodo
Oche obodo na obodo kacha ukwuu na Transylvania County,Nwokochadị n'akụkụ ndịda ọdịda anyanwụ North Carolina. N'ime Transylvania County nwere ihe karịrị 200 kilomita nke mmiri mmiri nkịtị, ihe karịrị 250 waterfalls, na 470 kilomita nke ụzọ ụkwụ njem.
Brevard NC Ọ bụ ezigbo ebe obibi?
Họọrọ Forbes MagazineNwokocha,NCn'etiti n'eluebeịla ezumike nká na 2019. Akwụkwọ a kọwara obodo dị ka 'obodo dịgasị iche iche nke mmiri mmiri na ugwu nke nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ 8,000, ndịda nke Asheville na mpaghara ọdịda anyanwụ steeti ahụ. Ọnụ ego ụlọ Midia bụ $ 218,000, 13% n'okpuru etiti mba.Eprel 24 2019
Brevard NC ọ dị mma?
Ohere nke ịbụ onye aja ma ọ bụ mpụ ihe ike naNwokochadị 1 na 38. Dabere na mpụ mpụ nke FBI,Nwokochaabụghị otu n'ime obodo kachasị nchebe na America. Ikwu makaUgwu North Carolina,Nwokochanwere ọnụego mpụ dị elu karịa 67% nke obodo obodo na obodo niile.
Ọ dị oke ọnụ ibi na Brevard NC?
TuleeNwokocha,NC akwụ ụgwọnkeIbi
Ngwongwo, ọrụ na ụlọ niile dị ọnụ ala. Imirikiti ngwongwo na ọrụ dị ọnụ.
Kedu otu nchekwa Brevard NC dị?
Brevard North Carolina ọ bụ ebe mara mma ibi?
Họọrọ Forbes MagazineNwokocha,NCn'etiti n'eluebe ezumike nkána 2019. Akwụkwọ a kọwara obodo dị ka 'obodo dịgasị iche iche nke mmiri na mmiri na ugwu nke ọnụ ọgụgụ mmadụ 8,000,ndịdanke Asheville na steeti ọdịda anyanwụ panhandle. Ọnụ ego ụlọ Midia bụ $ 218,000, 13% n'okpuru etiti mba.24.04.2019
steve smith ọgba tum tum na mberede
Ndi snow ke Brevard NC?
Nwokochankezi nke 8 sentimita asatọ nkesnowkwa afọ.
Ebee ka ụzọ ụgbọ ịnyịnya igwe ugwu kachasị mma dị n'ebe ọdịda anyanwụ North Carolina?
Na omenala, enweela ụzọ nzọ ụkwụ atọ na WNC nke ọ bụla ịnyagharị na akwụkwọ akụkọ na-enyocha, gị onwe gị ga-achọ ịnya onye ọ bụla n'ime ha. Ha bụ Pisgah, Dupont State Forest na Tsali. Pisgah na DuPont dị nso na Brevard; Tsali dị nso na Bryson City na Cherokee.
Ebee ka ụzọ ụgbọ ịnyịnya igwe ugwu kachasị mma na Florida?
Ha bụ Pisgah, Dupont State Forest na Tsali. Pisgah na DuPont dị nso na Brevard; Tsali dị nso na Bryson City na Cherokee. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e nweela ụzọ ọhụrụ dị iche iche meghere maka ịnya igwe n'elu ugwu na mpaghara ahụ, ọ ga-abụrịrị na ha kwesịrị ịlele.
Ebee ka ugbo igwe ugbo ala di na North Carolina?
DBỌCH UP AH UPR.. Ọrụ ntuziaka na ọrụ nkuzi anyị dị na etiti Pisgah National Forest nke North Carolina. Anyị na-enweta ụzọ dị egwu si n'ọnụ ụzọ azụ anyị. Ikwesighi igbanye igwe n’ịnyịnya igwe wee nwee ike ima Ubi Ugbo Bike.